Black Mamba - Yezilwane ezihuquzelayo - Iningizimu Afrika
Black Mamba, Common or Black-mouthed Mamba [Dendroaspis polylepis]
Imamba yinyoka enkulu eqondile, inekhanda elimise okwebhokisi namazenga abushelelezi. Umhlubulo wasemuva unsundu, ayinawo umbala omnyama. Isisu sayo simpunga okukhanyayo kwanti kwesinye isikhathi siba namachashaza amnyama. Umlomo wayo mnyama.
Zitholakala enyakatho yakuleli, kwehle eningizimu ngasezindaweni ezigudle ulwande KwaZulu-Natali. Ziyatholakala nakoSt Johns nasezindaweni ezingenhka e-Afrika ezifana neSenegal neSomalia.
Imamba ibekela amaqanda ayi-12 kuya kwayi-17 ezidulini zezintuthwane. La maqanda aze achamisele emuva kwezisuku ezingama-80 kuya kwangama-90. Zikhula masishane izimamba ngoba enyonyaka nje ubude bayo busuke sebulinganiselwa emamilimitheni ayi-2000.
Ushevu wemamba uyingozi kakhulu ngoba ubulala ama-cell emzimben futhi umisa nenhliziyo ukushaya. Ikhipha ushevu ongamamiligremu ayi-100 kuya kwangama-400, kanti intwana encane engangamiligremu ayi-10 kuya kwayi-10 yanele ukuthi ingabulala umuntu.
Imvamisa imamba idla izinyoni ezincane namagundwane.